Bar Filter magnetic - Shiinaha Ningbo Sine
Qeybta Parttuubooyinka magnetic joogto ah Strong go'an gal qaab. Marka wax ay ku jiraan walxaha / steel bir maraa qaab dhismeedka, walxaha birta / steel taranto doonaa derbigii Tuubooyinka gal. Sidaas darteed, qalabka iyo tas-hiilaadka noqon doonaa ammaan iyo dhawaajiyaan, iyo wax soo saarka waxay noqon doonaan isticmaalka biyo nadiif ah.
Model PMGL filtarrada magnetic codsan karaan in dawooyinka, nadaafadda, dharka, mashiinada iyo cuntooyinka. qofka ayaa soo jiidan doonaa walxaha birta / steel ka cabitaanno ah iska, ka mid ah badar ama boolbare.
Size, dhererka iyo qaabka
Size iyo dhererka oo ka mid ah dhuumaha magnetic, iyo qaabka dhismeedka kala duwanaan doonaa codsigaaga.
Beegyada uu farsamo ee birta magnetic
Previous: Guddoomiyaha Magnet
Next: Qalabka Filter magnetic
Qalabka Filter Oil
Qalabka Filter Biyaha